Games Betting Rules | SBOBET Information Center
Reference Number: AA-00215 Last Updated: 2018-11-06 15:150Rating/ Voters
The following rules (the "Games Betting Rules") govern the end user's use of all the Operator's interactive games betting products and services (the "Games") offered via the "GAMES" and "CLASSIC GAMES" tabs of www.sbobet.com and/or available at www.sbobet.com (the "Website"). For the purposes of these Games Betting Rules, the term "Games" shall include the betting products and services offered by both the GAMES and the CLASSIC GAMES tabs. They form part of the Operator's General Terms and Conditions, which apply to all the interactive and wagering products and services the Operator offers to individuals who register for or are holders ofabetting account with the Operator. In the case of any inconsistency between the General Terms and Conditions and any of these Games Betting Rules, the General Terms and Conditions shall prevail.
All bets on the Games ("GamesBets") accepted by the Operator are subject to these Games BettingRules.
ဤ”အားကစားပွဲများ”လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေသများ ဖော်ပြချက်တစ်လျှောက်တွင်“ကျွန်ုပ်တို့”၊ “ကျွန်ုပ်တို့၏” (သို့မဟုတ်)၊ “ကျွန်ုပ်တို့ကို” စသော အသုံးအနှုန်းများသည် အော်ပရေတာကို ရည်ညွှန်းပြီး၊ “အသုံးပြုသူ(ကစားသမား)၊ “သင်”၊ (သို့မဟုတ်) “သင်၏” စသော အသုံးအနှုန်းများသည် အသုံးပြုသူ(ကစားသမား)ကို ရည်ညွှန်းသည်။
အထွေထွေ ဂိမ်းကစားခြင်း ဥပဒေသများ
ဤအားကစားပွဲများလောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေသများကို တိကျသောကစားပွဲတစ်ခုချင်းစီ၏ ဥပဒေသများ(“တိကျသော အားကစားလောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေသများ”)မှ ထောက်ပံထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤတွင် ကွဲလွဲချက်များရှိပါက အပိုဒ် (၁၆)တွင် တိကျသော ကစားပွဲများကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၁။ ဥပဒေသများ အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့
ဤဥပဒေသများသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄)ရက်နေ့မှ စတင်၍ အကျိုးသက်ရောက်သည်။
၂။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့် အခြားဘာသာများအကြား ကွဲလွဲမှု
အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့် အခြားဘာသာများဖြင့် ဂိမ်းများ လောင်းကစားခြင်းဥပဒေသများတွင် မည်သည့်ကွဲလွဲမှုမဆို ဖြစ်ပေါ်လျှင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို အမှန်အဖြစ် လက်ခံမည်။
၃။ ဥပေဒသများအား ဘာသာပြန်ဆိုမှု
အကယ်၍ဤဂိမ်းများ လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေသများကို ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် အငြင်းပွားစရာများရှိလာပါကအော်ပရေတာ၏ ဘာသာပြန်မှုကို အမှန်အဖြစ် လက်ခံမည်။
၄။ လောင်းကစားသည့် နည်းလမ်းများ
အော်ပရေတာသည် အွန်လိုင်းမှပြုလုပ်သည့် ဂိမ်းများလောင်းခြင်းကိုသာလျှင် လက်ခံမည်။ အခြားမည်သည့်နည်းဖြင့် (ဥပမာ- တယ်လီဖုန်းဖြင့် လောင်းခြင်း) လောင်းခြင်းကိုမျှ လက်မခံပါ။
၅။ ဂိမ်းများတွင် ပြုလုပ်သည့် အလောင်းအစားများ တရားဝင်မှု
အော်ပရေတာကနေရာပေးပြီး “အလောင်းအစားအိုင်ဒီ”ပေးထားသည့် ဂိမ်းလောင်းကစားမှုတစ်ခုကိုသာ လက်ခံသည့် အလောင်းအစားဟု သတ်မှတ်သည်။
၆။ လောင်းကစားခြင်း မှတ်တမ်း
အချိန်မရွေး သင်ပြုလုပ်ထားခဲ့သည့် အလောင်းအစားများကို ကြည့်လိုလျှင် သက်ဆိုင်ရာဂိမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည့် ထုတ်ပြန်ချက်ကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်သည်။
၇။ ကျပန်းနံပတ်ထုတ်ပေးသူ(ကျပန်းနံပါတ် ထုတ်ပေးသည့် ပရိုဂရမ်)
ဂိမ်းများသည် တရားမျှတမှုရှိစေရန် ရလဒ်များအားလုံးကို “အာရ်အင်ဂျီ”ခေါ် ကျပန်း နံပါတ်ထုတ်ပေးသည့် ပရိုဂရမ်ဖြင့် ထုတ်သည်။ အော်ပရေတာ၏ ကျပန်း နံပါတ်ထုတ်ပေးသည့် ပရိုဂရမ်သည် တတိယပါတီ (Third-party) စမ်းသပ်ရေး ကုမ္ပဏီက စစ်ဆေးပြီး အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါသည်။
၈။ ဂိမ်းကစားနေစဉ် ကော်နက်ရှင်(အဆက်အသွယ်) ကျခြင်း
ဒရော သည် ဂိမ်းတစ်ခုအတွက် ကျပန်းနံပါတ်ပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်သည့် ရလဒ်ကိုဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂိမ်းများ တွင် “Draw On Demand”(လိုအပ်ချက်အရ ဒရော) နှင့် “Common Draw”(ဘုံ ဒရော) ဟူ၍ (၂) မျိုးရှိသည်။
ရလဒ်သည် ကစားသမားတစ်ယောက်ဆီအတွက် တစ်ခုတည်းဖြစ်သည် (ဥပမာ- ကဒ်ခြစ်၊ ကီနို၊ ပိုကာ နှင့် တစ်ဦးတည်းးကစားရသည့် ရိုလတ်)
DrawOn Demand ဂိမ်းတွင် (ဥပမာ- ကဒ်ခြစ်ကစားခြင်း) အဆင့်တစ်ဆင့်ထဲတွင် တစ်ဦးတည်းကစားနေစဉ် ကော်နက်ရှင် ပြတ်သွားလျှင် အဆိုပါ ဂိမ်းသည် သင့်အတွက် အလိုအလျောက်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။
Draw On Demand ဂိမ်းတွင် အဆင့်များစွာဖြင့် ကစားနေစဉ် ကော်နက်ရှင်ပြတ်သွားလျှင် (ဥပမာ- ဘောနပ်စ်အလှည့်ပါသည့် ဂိမ်းစက်) နှင့် သင့်ဂိမ်းသည် ဒုတိယအဆင့်ကိုရောက်နေပြီဆိုလျှင် သင့်ဂိမ်း၏အသေးစိတ်ကို ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်ပြီး သင့်အနေဖြင့် လော့ဂ်အင်ပြန်ဝင်ပြီး ဆက်ကစားနိုင်သည်။ အကယ်၍ ကော်နက်ရှင်မပြတ်ခင် ဒုတိယအဆင့်သို့ မရောက်လျှင် အဆိုပါဂိမ်းသည် သင့်အတွက် အလိုအလျောက် ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။
Draw On Demand ဂိမ်းတွင်ကစားနေစဉ် ကော်နက်ရှင်ပြတ်သွားလျှင် လက်ရှိဂိမ်းကို ထိန်းသိမ်းထားမည်။ အခြားသော ဂိမ်းများအတွက် အော်တိုပလေးကို ကစားသမားက သုံးထားခဲ့လျှင် အဆိုပါဆိုင်းငံထိန်းသိမ်းထားသောဂိမ်းကို ဖျက်သိမ်းမည်။ ဖျက်သိမ်းခံရသည် ဆိုင်းငံဂိမ်းကစားသမား၏ အကောင့်မှ ငွေကို ယူမည်မဟုတ်ပါ။
Common Draw ဂိမ်းတွင် ကစားသမားတစ်ဦးထက်ပိုသော ကစားသမားများက သတ်မှတ် ဂိမ်း ရလဒ် တစ်ခု အပေါ်တွင် ကစားနိုင်ပြီး ကစားသမားအားလုံးအတွက် ရလဒ်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။ (ဥပမာ - တိုတိုဒရော နှင့် ဘုံစားပွဲတင် ရိုလတ်)
CommonDraw ဂိမ်းတွင် ဒရောကို လော့ဂ်အင်မဝင်ထားလည်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကော်နက်ရှင်မပြတ်မီ အောင်မြင်စွာ လောင်းနိုင်လိုက်သော ဂိမ်းများတွက် အနိုင် (သို့မဟုတ်) အရှုံးကို သတ်မှတ်ပေးပြီး ငွေလျော်ပေး ထိုက်သည်။ အကယ်၍အလောင်းအစားဂိမ်းများ အပြီးသတ်မလျော်မီ ကော်နက်ရှင်ပြန်ရလျှင် သင်၏ ကျန်နေခဲ့သော မလျော်သေးသည့် အလောင်းအစားများအားလုံးကို လောင်းကစားစလစ်ပ်တွင် မြင်နိုင်သည်။
မှတ်ချက် Draw On Demand ဂိမ်းတွင် ဖြစ်စေ ၊ Common Draw ဂိမ်းတွင် ဖြစ်စေ ကော်နက်ရှင် ပြတ်ခဲ့လျှင် သင်၏ အလောင်းအစားများအားလုံးကိုသင်၏ ဂိမ်းတစ်ခုစီအတွက် ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ကော်နက်ရှင်ပြန်ရသည့်အချိန်တွင် မြင်နိုင်သည်။
တကယ်ငွေကြေးဖြင့် ကစားရန် သင့်အကောင့်ကိုသုံးပြီး အမည်နှင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို အထွေထွေ စည်းကမ်း စည်းမျဉ်း များအရ သုံးပြီးလောင်းရမည်။
ကစားပွဲကန့်သတ်ချက် အသေးစိတ်ကို ဂိမ်းတစ်ခုစီအတွက် အကူအညီဖိုင် တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဂိမ်းတစ်ခုစီ အတွက် သတ်မှတ်ထားသော တိကျသော ဂိမ်းကစားခြင်းဆိုင်ရာ လောင်းကစားခြင်းဥပဒေသများ(အပိုဒ် ၁၆) တွင် ကြည့်ပါ။
၁၁။ အပျော်တမ်း ကစားခြင်း
ဂိမ်းများကို အပျော်တမ်းကစားလိုလျှင်Play for Fun ကို ရွေးပါ။ သင်သည် ငွေအတုဖြင့် ကစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ နိုင်ခြင်း ရှုံးခြင်းများအားလုံးသည်လည်း အတုအယောင်သာဖြစ်သည်။
ဂိမ်းပွဲစဉ်များတွင် ပျက်လေ့မရှိသော်လည်း ပျက်ပြယ်အလောင်းအစားဟု ကြေငြာခဲ့လျှင် သင်၏ မူရင်းလောင်းကြေးငွေ ကို ပြန်အမ်းမည်။
ချွတ်ယွင်းမှုကြောင့် ကစားခြင်းများနှင့်လောင်းကြေးများ ပျက်ပြယ်ခြင်း
မည်သည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းချက် ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲ (သို့မဟုတ်) ကော်နက်ရှင်တို့ ချွတ်ယွင်းခဲ့လျှင် လောင်းကစားဂိမ်းများအားလုံးကို ပျက်ပြယ်အဖြစ်ကြေငြာပြီး မည်သည့် ရလဒ်မှ ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် လောင်းကစားဂိမ်းများကို အောက်ပါအခြေအနေများတွင် ပျက်ပြယ်အလောင်းအစားအဖြစ် ကြေငြာပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
- အလောင်းအစားနှင့်ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမမှန်ကန်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မမှန်ကန်ခြင်း၊
- လောင်းကစားသမားသည် လိမ်လည်လှည့်ဖျားခြင်း၊ ညှိနှိုင်း၍ လိမ်လည်မှုတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ ငွေမဲမှ ငွေဖြူသို့ပြောင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) အခြားတရားမဝင်သော လှုပ်ရှားမှုများအားလုံးထဲမှတစ်ခုခုဖြစ်သည်ဟု သံသယရှိခြင်း၊
- လောင်းကစားသမားသည် အသက်(၁၈) နှစ် အောက် (သို့မဟုတ်) လောင်းကစားရန် နိုင်ငံမှသတ်မှတ်ထားသော တရားဝင် အသက် မပြည့်ဟု ယုံကြည်ခြင်း၊
- အလောင်းအစားလက်ခံရာတွင် သတ်မှတ်ကန့်သတ်ချက်ထက် ကျော်နေခြင်း၊
- လောင်းကြေးပမာဏကို လောင်းကစားသမား၏ အကောင့်မှမတတ်နိုင်ခြင်း၊
- အမှားအယွင်းတစ်ခုခု (လူ သို့မဟုတ် အခြား) (သို့မဟုတ်) စနစ်ပျက်စီးမှုကြောင့် မှားယွင်းသော အလေးသာမှုများကို သုံးမိခြင်း၊
- နည်းပညာဆိုင်ရာအမှာများဖြစ်သည့် ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်း၊ ချွတ်ယွင်းခြင်း၊ အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ နှောင့်နှေး ခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်၊ DOS attack၊ (သို့မဟုတ်) အချက်အလက် ပျက်စီးခြင်း (သို့မဟုတ်)
- နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာချွတ်ယွင်းမှုက အလွန်အမင်း (သို့မဟုတ်) ပုံမှန်မဟုတ်သော နိုင်သူများအဖြစ် ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း
အလောင်းအစားတစ်ခုသည် လူ့အမှား (သို့မဟုတ်) တစ်စုံတစ်ရာအမှားကြောင့် မမှန်မကန် ရလဒ် ထွက်ခဲ့လျှင်၊ အဆိုပါ လျော်ကြေးကို တရားမဝင်ဟု သတ်မှတ်ခွင့်ရှိသည်။ လောင်းကစားသမား အကောင့်တွင် မလုံလောက်သောငွေ ကို ခွင့်ပြုပြီး အသုံးပြုသူကိုမူ လိုအပ်သည့် ပမာဏကို အော်ပရေတာထံမှ ရရယူနိုင်သည်။
၁၃။ ဂိမ်းများ အသုံးပြုမှု
ဂိမ်းများကိုကိုယ်ပိုင် ဖျော်ဖြေရေးအတွက်သာ အသုံးပြုမှုရမည်။ ဂိမ်းနှင့်ဆက်စက်နေသော (ဥပမာ ပုံ၊စာ၊ စသည်ဖြင့်) အပါအဝင် မည်သည့်အရာကိုမျှ စီးပွားရေး (သို့မဟုတ်) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလို့ငှာ အသုံးပြုခြင်းကို တင်းကြပ် စွာ တားမြစ်ထားပြီး၊ အော်ပရေတာ (မည်သည့်တရားဝင် ဥပဒေကို မဆို လိုက်နာအောင် ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ )ထံတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်အားလုံးရှိသည်။
၁၄။ မကျေနပ်မှုအပေါ် တိုင်ကြားချက်များ
အကယ်၍ ကစားသမားတစ်ဦးက ဂိမ်းတစ်ခုခုပေါ်တွင်လောင်းကစားသည့် ရလဒ်ကို မကျေနပ်၍တိုင်ကြားလိုလျှင်လိုလျှင် CustomerService Team သို့ (၇၂)နာရီအတွင်း အီးမေးလ်လိပ်စာ support@sbobet.com မှတဆင့် အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံ အသေးစိတ်အချိန်များအပါအဝင် တိုင်ကြားနိုင်သည်။ အော်ပရေတာသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စနစ်ရှိ အချက်အလက်များကိုသုံးပြီး တိုင်ကြားချက်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးလိမ့်မည်။ သင်၏ မကျေနပ်မှုတိုင်ကြားချက်နှင့်ပတ်သက်၍ အော်ပရေတာသည် အကျိုးအကြောင်း အထောက်အထားခိုင်လုံစွာဖြင့် နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ပေးမှုကို သဘောတူ ညီရမည်။
ဂိမ်းကစားသမားအနေဖြင့် ဂိမ်းများ၏ဆော့ဖ်ဝဲ ပြုလုပ်သူကိုဆန့်ကျင်ပြီး မည်သည့်ကိစ္စ၊ အကြောင်းအရင်း သို့မဟုတ် အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍မဆို မည်သည့်ရပိုင်ခွင့် (သို့မဟုတ်) တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ကိုမျှတဖက်တွင်သက်ညှာ ဆောင်ရွက်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။
ဂိမ်းကစားသမားအနေဖြင့် အော်ပရေတာကိုဆန့်ကျင်ပြီး သင်(သို့မဟုတ်)သင့်အကောင့်၏မည်သည့်တတိယပါတီ(Third-party)၊ အခြားကစားသူများ (သို့မဟုတ်) အခြားမည်သည့်နည်းပညာမှားယွင်းမှု ချွတ်ယွင်းမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မည်သည့်ရပိုင်ခွင့် (သို့မဟုတ်) တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ကိုမျှ (သို့သော် အပိုဒ် (၁၂)တွင် ဖော်ပြထားသည်မှအပ) သက်ညှာ ဆောင်ရွက်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။
အော်ပရေတာသည် ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် သုံးလိုသော အသုံးပြုသူနှင့် ပူးပေါင်းပြီး လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည့် လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်ကို လုပ်ဆောင်သွားရာတွင် အဆိုပါ သီးသန့်လောင်းကစားခြင်းအတွက် အခြားအော်ပရေတာဖြင့် လောင်းကစားခြင်းအတွက် (သို့မဟုတ်) သီးသန့်လောင်းကစားသူသည် အော်ပရေတာနှင့် အခြားအကောင့်တစ်ခုသုံးကာ ဆက်လောင်းကစား၍ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် မည်သည့်တာဝန်မျှယူမည်မဟုတ်ပါ။
၁၆။ ဂိမ်းတစ်ခုစီအတွက် လောင်းကစားခြင်း ဥပဒေသများ
ဂိမ်းတစ်ခုစီအတွက် လောင်းကစားခြင်း ဥပဒေသများကို ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် အောက်ပါ လင့်ခ်များအတိုင်း သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၁၇။ ဥပဒေသများ ပြောင်းလဲခြင်း
အော်ပရေတာသည် အထက်ဖော်ပြပါ မည်သည့် ဥပဒေသများ(ဂိမ်းတစ်ခုစီအတွက် လောင်းကစားခြင်း ဥပဒေသများ အပါအဝင်) ကိုမဆို စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအရ လိုအပ်လျှင် အချိန်မရွေး ပြောင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။